Halkee lagu bixinayaa $120 milion oo World Bank ugu deeqay Soomaaliya? | Keydmedia
Halkee lagu bixinayaa $120 milion oo World Bank ugu deeqay Soomaaliya?
Wasiirka Beeraha DF Saciid Xuseen Ciid ayaa sheegay in lacagta lagu filanyo mashaariic wax looga qabanayo Ayaxa, fatahaadaha iyo caabuqa COVID-19.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Soomaaliya ayaa ka heshay Bangiga Adduunka lacag deeq ah oo gaareysa $120 million oo dollar taasoo la qorsheeyay in lagu bixiyo dhowr mashruuc, oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka Ayaxa, COVID-19 iyo fataahadaha.
Wasiirka Beeraha DF, Saciid Xuseen Ciid, waxa uu tilmaamay in World Bank ay ugu talo-gashay lacagta in lagu caawiyo malaayiin Soomaaliya ku nool, oo dalagii beeraha uga baxayay ku waayay ayaxa iyo fatahaadaha Webiga Shabeelle.
Hay'adaha Caalamiga ee mashaariicda horumanineed iyo kuwa bini'aadnimo kawada dalka, ayaa wajahaya eedeymo la xiriira inay lunsadaan lacagta loo soo dhiibo, taasoo aan gaarin dadkii loogu tala-galay ee ku dhibaateysan gobollada ka baxsan Muqdisho.
Al-Shabaab ayaa maamusho dhul-ballaaraan oo malaayiin qof oo Shacab ah ay ku nool yihiin, kuwaasoo aan heli karin gargaarka bini'aadnimo kadib markii Kooxda ay sanadkii 2011 ka mamnuucday goobaha ay haysato hay'adaha ajnabiga inay ka shaqeeyaan.
Arintaan ayaa keentay in gargaarka ku baxaya ballaatyiinka dollar lagu koobo meelaha ay dowladda joogto, oo Muqdisho ugu horeyso iyo maamul goboleedyada, iyadoo aan jirin hanaan isla-xisaabtan ah iyo hubinta in gurmadka la gaarsiiyay dadkii soo diray.